မဲဆန္ဒပြုချက်များ ( X ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မဲဆန္ဒပြုချက်များ ( X )
မဲဆန္ဒပြုချက်များ ( X )
Posted by mG on Oct 27, 2010 in News |9comments
မဲဆန္ဒပြုချက်များအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်သာမက မြန်မာနိုင်ငံ၏ နာမည်ကြီး(သို့) ကိုယ်စားပြု မြို့များတွင် စည်စည်ကားကားပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်လေ၏။ထိုဆန္ဒမဲပေးပွဲကို ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့သေသေချာချာ နားလည် သဘောပေါက်လက်ခံမှတာ မဲပေးစေလိုကြောင်းကို ၈၈ကျောင်းသားများ၏ လက်ကမ်းစာစောင်များ ရရှိသူများအားလုံး အသိဖြစ်၏။
အခုတွင် မဲဆန္ဒပေးပွဲကြီး စတင်ကျရောက်လာတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် မိမိတို့အနေနှင့် မည်သူ့ကို မဲပေးမယ်ဆိုတာကို အစမ်းဖြေကြားနိုင်ရန် ကိုယ်စားပြုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဥပမာ – ၁။ ကြံ့ခိုင်ရေး (ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)
၂။ ခမောက် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု)
၃။ စပါးနှံ (တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ)
၄။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)
မှတ်ချက် ။ ။ ပါတီများအများအပြားရှိသော်လည်း အဓိက ပါဝင်သော ပါတီများအား အကြမ်းအားဖြစ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
၁။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ (ပါတီခေါင်းဆောင်များ)
ဒေါက်တာသန်းဝင်း၊ဦးတင်အောင်အောင်၊ဦးသာဆိုင်၊ဦးတိုးပို၊ဒေါက်တာလှစိုးညွန့်၊ဦးစောနန္ဒီ၊ဦးမြင့်ဖေ အစရှိတဲ့ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေနဲ့ဗဟိုဦးစီး အဖွဲ့ဝင်များ တိုင်းစည်းရုံးရေး
အဖွဲ့ဝင်များအပါအ၀င်ယခင် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ်တွေနဲ့ အခြားဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေက ဦးဆောင်ထားပါတယ်။
၂။ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)
ပါတီခေါင်းဆောင်များ………..ဦးရဲထွန်း (ဥက္ကဌ) ၊ ဦးသန်းဦး (ဒု-ဥက္ကဌ) ၊ ဦးလင်းစိုး (အတွင်းရေးမှူး) ၊ ဦးအေးသွင် (ခ) ဦးအောင်ခိုင်ဦး (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး)။
၃။ ၀ံသာနု NLD (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)
ပါတီခေါင်းဆောင်များ……….ဦးစောထွန်းရင် (ဥက္ကဌ) ၊ ဦးရဲမင်း (ဒု-ဥက္ကဌ) ၊ ဦးအောင်မြင့် (ဒု-ဥက္ကဌ) ၊ ဒေါ်နန်းရွှေကြာ (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး) ၊
ဦးငွေမှိုင်း (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး – ၁) ၊ ဦးကျော်ကျော် (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး – ၂)။
ပါတီခေါင်းဆောင်များ………ဦးတင်ထွန်းမောင် (ဥက္ကဌ ) ၊ ဦးကြည်ဝင်း (ဒု-ဥက္ကဌ / ၁) ၊ ဦးအုန်းလွင် (ဒု-ဥက္ကဌ/၂) ၊ ဦးတင်ဝင်း (အတွင်းရေးမှူး) ၊
ဦးဝင်းဇော် (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး-၁) ၊ ဦးလှအောင် (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုး – ၂ ) ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ၁၅ ဦး ။
၅။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင်များ …………ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင် (ဥက္ကဌ) ၊ ဦးစိုင်းဆောင်ဆီ (ဒု-ဥက္ကဌ) ၊ ဦးစိုင်းလှကျော် (အတွင်းရေးမှူး) ။
၆။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင်များ……….ဒေါက်တာအေးမောင် (ဥက္ကဌ) ၊ ဦးအုန်းတင်၊ဦးတင်ဝင်း၊ ဦးစောဖြူ ၊ဦးအောင်ပန်းသာ (ဒု-ဥက္ကဌများဖြစ်၏) ၊
ဦးဦးလှဘေ (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး) ။
ပါတီခေါင်းဆောင်များ……….ဦးညိုမင်းလွင် (ဥက္ကဌ) ၊ ဒေါ်စန္ဒာဦး (ဒု-ဥက္ကဌ / ၁) ၊ဦးတင်မောင်အေး (ဒု-ဥက္ကဌ/၂) ၊ ဦးနေမျိုးဝေ (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး) ၊
ဦးအောင်မျိုးဦး (တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး) ။
၈။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်
ပါတီခေါင်းဆောင်များ…………..ဦးအေးလွင် (ဥက္ကဌ) ၊ ဦးခင်မောင်ဦး (ဒု-ဥက္ကဌ) ၊ ဦးဌေးအောင် (အတွင်းရေးမှူး) ၊ ဦးဌေးလွင် (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး) ။
ပါတီခေါင်းဆောင်များ…………..ဦးသိန်းဌေး (ဥက္ကဌ) ၊ ဦးဌေး (ဒု-ဥက္ကဌ) ၊ ဦးသိန်းတင်အောင် (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး) ၊
ဦးသောင်းဝင်း (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး/၁) ၊ ဒေါ်စန်းစန်းအေး (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး/၂) ၊ ဦးကိုကိုကြီး (စာရင်းစစ်)။
ပါတီခေါင်းဆောင်များ………..ဦးအောင်သန်း (ဥက္ကဌ) ၊ ဦးစိုးမောင် (ဒု-ဥက္ကဌ/၁) ၊ ဦးတင်ထွေး (ဒု-ဥက္ကဌ/၂) ၊ ဦးသန်းထွန်း (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး) ၊
ဦးအောင်မော်ဝင်း (တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး/၁) ၊ ဦးစိန်မောက် (တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး/၂) ။
၁၁။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)
ပါတီခေါင်းဆောင်များ………..ဦးသုဝေ (ဥက္ကဌ) ၊ ဒေါ်သန်းသန်းနု (အတွင်းရေးမှူးချုပ်) ၊ ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး) ၊
ဒေါ်နေရီဗဆွေ (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး) ။
၁၂။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင်များ……….လက်ရှိနိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန် ဦးဆောင်ကာ လက်ရှိဝန်ကြီး ၊ဒု-၀န်ကြီး ၊ မြို့တော်ဝန် နှင့် ဒု-မြို့တော်ဝန်များ ပါဝင်သည့်
ဗဟိုကော်မတီဝင် ၂၇ ဦး။
၁၃။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (စပါးနှံ)
ပါတီခေါင်းဆောင်များ…………ဦးထွန်းရီ (ဥက္ကဌ) ၊ ဦးသန်းတင် (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး) ၊ ဦးခင်မောင်ကြီး (တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး) ၊
ဦးခင်မောင်ဦး (အခြားခေါင်းဆောင်များ) ၊ သူရဦးစောဖြူ (အခြားခေါင်းဆောင်များ) ၊ ဦးလှထွန်း (အခြားခေါင်းဆောင်များ) ။
ပါတီခေါင်းဆောင်များ……….ဦးဘိုမောင် (ဥက္ကဌ) ၊ ဦးလှမြင့် (ဒု-ဥက္ကဌ) ၊ ဦးဘာနေ (အတွင်းရေးမှူး) ။
ပါတီခေါင်းဆောင်များ…………ဦးထွန်းအောင်ကျော် (ဥက္ကဌ) ၊ ဦးသိန်းရွှေ (အတွင်းရေမှူး) ၊ ဦးလှသိန်း (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး) ၊ ဒေါ်ရီရီစံ (တွဲဖက်အတွက်းရေးမှူး/၂)။
ပါတီခေါင်းဆောင်များ………ဦးဇမ်ကျင်ပေါ်(ခ)ဦးဇိုဇမ်း (ဥက္ကဌ) ၊ ဦးချန်ဟဲ (ဒု-ဥက္ကဌ) ၊ဦးကျဲအိုဘစ်ထောင် (အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး) ၊
ဦးထီယံအုပ်ထန်း(ငယ်ပီး) (အတွင်းရေးမှူး-၁) ၊ ဦးထောင်းခင်ပေါင် (အတွင်းရေးမှူး-၂) ။
ပါတီခေါင်းဆောင်များ …………စောထွန်းအောင်မြင့် (ဥက္ကဌ) ၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာ စောစိုင်မွန်သာ(ဒု-ဥက္ကဌ) ၊ စောအေးကို (ဒု-ဥက္ကဌ/၂) ၊ စောကဲနက် (ဒု-ဥက္ကဌ/၃) ၊
မန်းစိန်လှဝင်း (ဒု-ဥက္ကဌ/၄) ၊ စောစေးဝါး (အထွေထွေအတွင်းရေမှူး) ။
ပါတီခေါင်းဆောင်များ……….ဦးနိုးထန်ကပ် (ဥက္ကဌ) ၊ ဦးလုံကျယ် (ဒု-ဥက္ကဌ) ၊ ဦး P-S ခမ်ဒူးနမ် (ဒု-ဥက္ကဌ/၂) ။
အထပ်ဖော်ပြပါ ပါတီများသည် ယခုလာမည် 17.10.2010 တွင်ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်မည့် ပါတီများဖြစ်သည်။
၃။တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော် လို့ခွဲထားပါတယ်။ ပြည့်သူ့လွှတ်တော် ကိုတော့ (အစိမ်းရောင်ကတာကိုယ်စားပြုပြီး) ၊အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုတော့ (အပြာရောင်ကတာ ကိုယ်စားပြု)၊
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုတော့ (ခရမ်းရောင်) ကကိုယ်စားပြုထားပါသည်။
မဲပေးရာတွင် အချက် (၂)ချက်သက်မှတ်ထား၏။
၁။မဲပေးလိုသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ အမည်တည့်တည့်လေးထောင့် အကွက်ထဲတွင် အမှန်အမှတ်အသားကို ဘောပင်ဖြင့် ထင်ရှားစွာရေးပါ။
၂။ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးထက်ပိုပြီး မဲမပေးရပါ။
ဆန္ဒမဲပေးပွဲ ကျင်းပမည့်ရက် – ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၊နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ ၊တနင်္ဂနွေနေ့။
မဲရုံဖွင့်ချိန် – ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၊နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ ၊တနင်္ဂနွေနေ့ ၊ နံနက် ၆ နာရီ ။
မဲရုံပိတ်ချိန် – ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၊နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ ၊တနင်္ဂနွေနေ့ ၊ ညနေ ၄ နာရီ ။
တစ်နိုင်ငံလုံး စုစုပေါင်းမဲဆန္ဒနယ် ၁၁၅၉ နယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မဲရုံအရေအတွက် လေးသောင်းနီးပါး။
တစ်နိုင်ငံလုံးမဲပေးခွင့်ရှိသူ အရေအတွက် ၂၉ သန်းကျော် ။
တစ်နိုင်ငံဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ် ၃၀၇၁ ဦး ။
တစ်နိုင်ငံလုံးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ် ၈၂ ဦး ။
တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ဝင်ရောင် ယှဉ်ပြိုင်မည့်နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၇ ခု ။
ဒီလောက်ဆိုရင် စာဖက်သူ ပရိတ်သက်များ ဘယ်သူ့ကို မဲပေးမလည်းဆိုတာကို သိနိုင်၊စဉ်းစားနိုင်ပြီပေါ့………..။နောက်ဆုံးကိုယ်မသိရင်တောင်မှ မဲရုံက တာဝန်ရှိသူကို မေးလို့ရတယ် တဲ့နော်………။
မှန်ကန်ပြီးသစ္စာရှိသော၊အပြောနှင့်အလုပ်ညီသော၊အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို မှန်ကန်စွာရွေးနိုင်ပါစေ။
သတိ ။ ။ အသက် ၁၈ ကျော်ပြီးသူတိုင်း မဲပေးရလိမ့်မည်။အကယ်လို့များ မပေးပဲ နေနေမယ်ဆိုရင် ကြံ့ခိုင်ရေပါတီဝင်များ ပင်ဖြစ်၏လောဟုမှတ်ယူ။
(သတိ ။ ။ အသက် ၁၈ ကျော်ပြီးသူတိုင်း မဲပေးရလိမ့်မည်။အကယ်လို့များ မပေးပဲ နေနေမယ်ဆိုရင် ကြံ့ခိုင်ရေပါတီဝင်များ ပင်ဖြစ်၏လောဟုမှတ်ယူ။)
မင်းဦးနှောက် အဲ့ဒါ အကုန်ဘဲလား
ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်သွားမှာပေါ့ကွာ
ဘယ်သူမှ သာ ဝင်မပြိုင်လို့ ကတော့ အဖွားကြီး နေပေါ့ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ
ဟဲဟဲဟဲ မင်းတို့ ကြိုက်တဲ့ အသုံးနှုန်းလေးနဲ့ ခေါ်ပြလိုက်တာပါ။
လူတွေအားလုံး ကို မဲပေးအောင်မင်းပြောနေတာက
မင်းဒီလို ပြောလိုက်လို့ လူတွေရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်မှာ မင်းတို့ တော်တော်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားသွားတယ်လေကွာ
စဉ်းစားပြီးလည်းလုပ်ပါကွာ သူများမျက်ရည်ကျမှ ထမင်းစားရတဲ့ဘဝကို ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ခုံမင်နေရတာတုန်း
မင်းတကယ်လုပ်သင့်တာက ဘီဘီစီတို့ လို အာဖက်အေတို့ လို ရေဒီယိုတွေကို ပိတ်အောင်လုပ်ပြစ်လေကွာ
တစ်ယောက်ယောက်က စောက်ရူးထပြီး စစ်သားတွေရဲ့ဘဝနစ်မွန်းမှု့ တွေကို အဲ့သည်ရေဒီယိုတွေကနေ
ဖွမိရင်တော့ အမလေး ပြေးပြေး လွတ်အောင်
အင်တာနက်ကိုတိုက်တဲ့ ဘာတဲ့ ဒီ တော့ပါတယ်
မင်းတို့ တစ်ကယ်ဖဲ့ရမှာက ရေဒီယိုကိုကွ ရှုးတိုးတိုး ငါပြောတယ်လို့ ဘယ်သူ့ ကိုမှ လိုက်မပြောနဲ့ 
တော်နေကြားသွားလို့ရေဒီယိုထဲ ကနေ မင်းတို့ ကို အုပ်စုလိုက်အပီဝင်ဖိုက်လို့ ရတယ်ဆိုတာ သိကုန်ရင် ခက်လိမ့်မယ်
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ခင်ဗျာ……..။စိတ်နဲ့မနှိုင်းပါနဲ့…။ကျွန်တော်ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီဝင် တဦးပါ။ခင်ဗျာမှာတောင် အဲ့လိုအောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ဒီအဖွဲ့ထဲကို ၀င်ဖို့ သတ္တိရှိပါ့မလား။ရှိမယ်မထင်ပါ။ခင်ဗျာလိုလူမျိုးက ရုပ်မပြရဲပဲပြောနေနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ NLD ကိုယ်စား၊၈၈ ကျောင်းသားတွေ နဲ့ပေါင်းပြီး စာစောင်တွေ ဝေတုန်းက ခင်ဗျာတို့လို လူမျိုးတွေ လိုအပ်တယ်။ဘယ်များရောက်နေတာလည်း။အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့ စောင်ခြုံမအော်နဲ့ အစဉ်မပြေနိုင်ဘူး။
ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေက အားလုံးကို သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီ မဲပေးဖို့ပြောပြထားတာ။ခင်ဗျားစိတ်နဲ့မနှိုင်းပါနဲ့ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ NLD လမ်းမှန်တွေပါ။ခင်ဗျာ ဒါတွေနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျန်တဲ့ စာဖက်ပရိတ်သက်တွေကို အာရုံအနှောက်ပါစေနဲ့ (မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု)။အထူးပင် လေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသွားလို့ ဘယ်သူ့ကိုမဲပေးရမယ်မှန်းမသိရင်တော့ သူတို့တွေက ကြံ့ခိုင်းရေးထဲကို မဲပေးမှာဗျ။ ခင်ဗျာတို့တွေရဲ့ မူဝါဒတွေမဟုတ်ဘူးလေ (ကိုမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုရေ)ခင်ဗျာတို့ မူဝါဒက “ကိုယ့်ထမင်းကို အေးအေးစားပြီးတော့ နိုင်ငံဘာဖြစ်ဖြစ် ဂရုမစိုက်ဘူး” ဆိုတာပဲလေ။ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံနဲ့အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်နေတာပါ။ခင်ဗျာ မှားနေပြီ (မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု)
ခင်ဗျာရဲ့ အကျင့်တွေဟာ အာဏာပိုင်လိုဖြစ်နေပြီ (လူသားအချင်းချင်း နှိမ်ဆက်ခြင်း မူဝါဒ၊ဘယ်သူသေသေ ငါမသေပြီးရော)။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ .. မြန်မာပြည်ကမည်သည့်ပါတီမဆို .. လွတ်လပ်စွာ မဲဆွယ်စည်းရုံးတာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်..။
ဗီဒီယိုဖိုင်၊ အသံဖိုင်တွေလည်း http://www.MandalayTube.com မှာတင်နိုင်ပါတယ်..။
Debate တွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Category > Politics>2010 Election အောက်မှာသာ ရွေးတင်ကြစေလိုပါတယ်။
အဲဒီမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်း နိုဝင်ဘာ ၇ရက်နေ့အထိ ခွင့်ပြုထားပါမယ်ခင်ဗျား။
ဖတ်သူများကလည်း တတ်နိုင်သလောက် Like or Dislike: နဲ့အမှတ်ပေးကြစေလိုပါတယ်။
ယူအက်စ်မှာလည်း ဒီမိုကရက်နဲ့ ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်တွေ ဒီနှစ်မှာ အကြီးအကျယ်ထိပ်တိုက်ဖြစ်နေတာပါ။ မြန်မာတွေထဲလည်းပါတီဝင်တွေရှိတာမို့ .. စကားပြောနေကြတာပါပဲ.။
နိုဝင်ဘာ ၂ရက်နေ့မှာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရှိပါတယ်..။
ရီပါ့ဗလစ်ကန်ရဲ့ .. တီးပါတီ လှုပ်ရှားမှုဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်..။
ယူအက်စ်မှာ မြန်မာတွေလည်း အမေရိကန်ဖြစ်နေတာ ၁သိန်းလောက်ရှိနေပြီမို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်း အရေးကြီးပါတယ်..။
အဲဒီအတွက်လည်း Debate တွေခွင့်ပြုပါတယ်..။
Please check my post named အလိမ်ခံရတဲ့ ” မြေစာပင်” . Thanks.
ဘာလို့မဲပေးရမှာတုန်း။ မမိုက်ချင်စမ်းပါနဲ့ကွာ။ မဲပညာပေးလုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း မဲမပေးဘဲခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ အမှာစကားနဲ့ အန်န်အယ်လ်ဒီက အခုဖြန့်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပါ မဲမပေးပဲ နေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ဘယ်လိုဆိုရင် ပယ်မဲဖြစ်မလဲ ဆိုတာပဲ တွဲထည့်လေကွာ။
ဘာကြောင့် mGကို အတင်းကာရော လိုက်ခိုင်းနေရတာတုံး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းပါကွာ။ မင်းအဖြစ်က ခံတုန်းကတော့ ကောင်းလို့ငြိမ်နေပြီး လူမိသွားမှ နာတယ်ဆိုပြီး အော်သလို ဖြစ်နေတယ်။ mG က ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ကွ၊ မင်းက နာလွန်းလို့ ဆေးတောင်မလို့ဆိုရင်လည်း ကြက်ဖွတ်ဆေးခန်း တွေရှိတယ်လကွာ။ မင်းလို ငိုချင်းအချကောင်းပုံမျိုးနဲဆိုရင် ဆေးအလကားသာမက နောင်တခါသုံးချင်သုံးဖို့ဆိုပြီး ချောဆီလေးပါ အပိုဆောင်း ပေးလိုက်မှာပေါ့။ ဆီကိုတော့ အပြင်မှာ ပြန်ဖျောရင်ဖျော၊ မဖျောချင်လည်း နောက်ဖြစ်လာမဲ့ ကြက်ဖွတ်အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ မနာရအောင် ဆောင်ထားပေါ့ကွာ။ ငါတို့ကတော့ နိုင်ငံခြားကနေ ကိုကာကိုလာသောက် ဟမ်ဘာဂါစားရင်းနဲ့ မင်းလိုနာလို့ အော်မဲ့သူတွေကို စောင့်နားထောင်နေပါ့မယ်။
ဟေ့ကောင် အောင်ပု (အင်တာနက်ထဲကလူတွေက ဖွတ်ကြားတွေပါ)
ဆိုတာက ဘာသဘောလဲကွ အင်တာနက်တွေနဲ့ ဘဲ စစ်အစိုးရရဲ့မတရားမှု့ တွေကို ရုပ်သံတွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပြီး
ပြသနိုင်ကြလို့ ပြည်သူတွေ ပေါက်ကွဲပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေကို တော်လှန်နေကြတာ မင်းမျက်လုံးကန်းနေလား
ကျနော်ဘယ်သူ့ကိုမှမခိုင်းသလို၊ ဘယ်သူ့ကိုမှလဲလိုက်မလုပ်ခိုင်းပါဘူ။ အားလုံးလွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲ လဲနိုင်ပါတယ်။
ကိုbigcatကခုလို သဘောထားကွဲ လဲ တာလဲကောင်းပါတယ်။ ကိုbigcatပြောတာဟုတ်မှာပါ၊ Internet သုံးပြီးကျနော်ကညာဏ်နဲနေပုံ၊ ရပါတယ်။ ကို bigcatကတော့ နိုင်ငံခြား မှာနေနေတာဆိုတော့ ညာဏ်တော်တော် ကောင်းမှာပေါ့နော်။အဲ အကိုရဲ. ”ဒုတ်ဒုတ်ချင်း ဒိုင်းဒိုင်းချင်း Homo” ဆိုတဲ့ပို့စ်လေးကိုကြည့်ပြီး အကို့ရဲ့ လိမ်တူတွေအပေါ် (အနဲငယ်) စိတ်ဝင်စားမှုကို ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အကိုပဲအသုံးပြုပုံနားလယ်မဲ့ ချောဆီလေး ကိုတော့ အကိုပဲ လိုရမယ်ရဆောင်ထားလိုက်ပါ။ ကိုကာကိုလာသောက် ဟမ်ဘာဂါစားရင်း၊ချောဆီလေး နဲ့ကbigcatိုတစ်ယောက် နိုင်ငံခြားမှာ ဇိမ်ကောင်းကောင်းခံနိုင်ပါစေ။ ။
ရီလိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်ကိုမော ရင်ဘတ်က နောက်ကျောဖြစ်သွားတယ်